Ny lahatsoratr'i János Szabó momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i János Szabó
János Szabó dia stratejika nomerika sy manam-pahaizana momba ny fifandraisana. Taorian'ny traikefa momba ny maso ivoho nandritra ny 10 taona mahery dia namorona rindranasa fifandraisana an-tsary miaraka amina fampidinana mihoatra ny 2 tapitrisa izy. Androany, János dia mitarika ny ekipan'i Chatler, ny AI fanakarana ny fikarakaran'ny mpanjifa.
Olombelona vs. Chatbots: Iza no hikarakara ny mpanjifa?
Sabotsy, Janoary 12, 2019 Sabotsy, Janoary 12, 2019 János Szabó
Tamin'ny taona 2016 rehefa nanjary nalaza ny chatbots dia nilaza ny rehetra fa hisolo toerana ireo olona mpiasan'ny masoivohon'ny fikarakarana mpanjifa. Taorian'ny fanangonana traikefa 2.5 taona momba ny chatbots Messenger dia somary hafa kely ankehitriny ny zava-misy. Ny fanontaniana dia tsy momba ny chatbots misolo ny olombelona, ​​fa ny fomba ahafahan'ny chatbots hiara-miasa amin'ny olombelona mifampikasoka. Chatbot tech dia fampanantenana lehibe tamin'ny voalohany. Mitaky ny hamaly ny fanontanian'ireo mpanjifa amin'ny fomba ifampiresahana ary hanome ny olombelona